[Wararkii] ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashay qaraxa ka dhacay Muqdisho
Tuesday June 15, 2021 - 11:10:34 in Wararka by Ali Adan
Faah faahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay qarax is-miidaamin ahaa oo saaka ka dhacay xerada ciidamada General Dhaga Badan oo ku taalla Ex Warshaddii hore ee Nac-Naca ee degmada Wadajir.
Inta la xaqiijiyey waxaa qaraxan ku dhintay in ka badan 10 qof oo ka mid ahaa dhalinyaradii meesha ku sugneyd, iyada oo ay ku dhaawacmeen tiro intaasi ka badan.
Xaaladda meesha uu qaraxu ka dhacay ayaa aad u kacsan, waxaana sidoo kale goobta ka dhashay burbur aad u xoogan.
Weli ma jiro wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha laamaha ammaanka Soomaaliya oo ku aadan qaraxaasi geystay khasaaraha badan.
Qaraxan ayaa kusoo aadayo, iyada oo horey ay usoo baxeen digniino ku aadan in gudaha magaalada ay soo galeen rag wata jaakadaha qaraxyada oo doonaya inay weerar is-miidaamin ah ka fuliyaan gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Si kastaba ammaanka Muqdisho ayaa muddooyinkii dambe ahaa mid faraha kasii baxayey, waxaana ka dhacayey falal liddi ku ah amniga, sida qaraxyo iyo dilal qorsheysan.